'सगुन'मा लगानी गर्नेहरुले डलर फलाए की हिस्स परे ? - HelloKhabar
‘सगुन’मा लगानी गर्नेहरुले डलर फलाए की हिस्स परे ?
१२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९
काठमाडौं । अमेरिकी सेयर बजारमा दर्ता भएको, नेपालीले खोलेको र लगानी गर्दा डलर फल्ने भन्दै प्रचार गरेर पटक पटक लगानी जुटाउने प्रयास गरिरहेको सगुनमा लगानी गर्नेहरु लामो समयदेखि हिस्स परेको पाइएको छ ।
सन् २०१७ देखि सुरु भएको सगुनले लगानी गर्न विभिन्न प्रलोभनजन्य प्याकेज देखाएर पटक पटक आह्वान गर्दै आएको छ । तर, तर वर्षौदेखि लगानी गर्नेहरुले डलर थाप्नु भन्दा पनि हिस्स परेको पाइएको छ ।
२०७१ मा एक अनलाइनमा डलर फल्ने भन्दै लेखाइएको समाचार
सगुनले पछिल्लो पटक नाम चलेका सबै नेपालका अनलाइनमा फेरि पनि विज्ञापन गरेर आफ्ना ग्राहक बढाउने र लगानी जुटाउने प्रयास गरेको छ । अहिले कान्तिपुर, अनलाइनखबर, सेतोपाटी, रातोपाटी लगायत नाम चलेको सबै अनलाइनमा प्रचार गरिरहेको छ । विश्वभरी चर्चित रहेको, अमेरिकी सेयर बजारमा दर्ता भएको, भारतकाे एक पत्रिकाले ५० करोड लगानी गरेको भनेर समाचार लेखाउने सगुनले पटक–पटक किन नेपालीले खोलेको भनेर नेपालबाट नै लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ त्यो पनि शंकाको विषय बनेको छ ।
सगुनले पछिल्लो पटक गरिरहेको विज्ञापनमा सगुन लाइटको एप डाउनलोड गर्न अपिल गरिएको छ भने हाइपरलिंकमा क्लिक गर्दा गुगल इन्ड्रोइडमा सगुन लाइट एप खुल्ने गरेको छ । उसले विज्ञापनमा एक हजारदेखि ५ हजार स्मार्ट क्वाइन पाउने उल्लेख गरेको छ ।
सगुनमा यसअघि ट्राईमारौं न भनेर थोरै लगानी गरेका विदेशमा बसेका एक लगानीकर्ताले सगुनको प्रसारमा भनिए जस्तो डलर नफल्ने अनुभव सुनाउँछन् । ‘यो सबै विज्ञापन हो, ठूलो सपना देखेर लगानी नगर्ने कि मात्र भनौं अहिले ।’ उनले भने ।
सगुनले ३० डलरदेखि सामान्य सेयर किन्न पाइने नियम बनाएको छ । ९ स डलरमा ३० कित्ता पाइने उसको बेवसाइटमा उल्लेख छ । त्यसबापत् उसले प्रमाण पत्र दिने गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट सेक्टरमा भने वर्षौदेखि स्पेसियल अफर भनेर राखिएको छ ।
सगुनमा लगानी गरेपछि दिइने भनेर राखेको प्रमाणपत्रको नमूना
नेपाली मिडियामा एकछत्र प्रचार
सगुनले आफ्ना गलत कुराहरु बाहिर नजाओस् भनेर नाम चलेका कुनै पनि नेपाली मिडियालाई नछुटाउने नीति लिएको पाइएको छ । उसले पेड समाचार लेखाएको समेत पाइएको छ । यस्ता समाचार नागरिक, सेतोपाटी लगायतमा एडभोटोरियल अर्थात पैसा तिरेर लेखाइएको समाचार भनेरै सिलसिलेवार रुपमा दिने गरेको पाइएको छ ।
एप राखेपछि ब्याट्री आफैं चार्ज हुने सगुनको झुट
सगुनले आफूलाई चर्चित बनाउन झुटो प्रचार गरेको समेत पाइएको छ । २०१७ मै एप राखेपछि मोबाइल चार्ज गर्नै नपर्ने भन्दै सगुनमार्फत झुटो प्रचार भएको पाइएको छ ।
एउटा अनलाइनको युट्युबबाट जारी भिडियोमा यदि तपाईको स्मार्टफोनमा सगुन एप्लिकेशन छ भने स्मार्टफोन एक पटक चार्ज गरेपछि सगुन एप्लिकेशन चलाउादा ब्याट्री आफै चार्ज हुने दाबी गरिएको थियो । सगुनको उक्त दाबी पाँच वर्ष बित्दा समेत व्यवहारमा नआउँदा एप डाउनलोड गराउन र सेयर बेच्न गरेको फण्डा मात्र भएको पुष्टि भएको छ । २०१७ मै माइसंसारले एप राखेपछि मोबाइल चार्ज गर्न नपर्ने ? सगुनको सेयर बेच्ने फन्डामात्रै कि साँच्चिकैरु भनेर ब्लग समेत लेखेको पाइएको छ ।
नेपाली मिडियाहरुले विज्ञापन पाएकाले यसबारे सही गलत जे भए पनि सुन नसुनै गरेर बसेको पाइएको छ ।
मुख्य समाचार हेलाेखबर - १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९
ब्यानर टप १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९
आर्थिक १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९
मुख्य समाचार १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९
ब्यानर १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९
पत्रपत्रिका १२ श्रावण २०७७, सोमबार ०७:४९